Izindaba - Ubhadane ngeke luphele maduze！
Ubhadane ngeke luphele maduze！
"Ukubheduka kwembulunga yonke
Ngeke iphele eminyakeni engu-1-2 ”
"Umqhele omusha ungashintsha kancane kancane ube yisifo esithathelanayo sonyaka sokuphefumula esiseduze nomkhuhlane, kodwa ukuba yingozi kwawo kukhulu kunomkhuhlane." Ekuseni ngoDisemba 8, uZhang Wenhong, umqondisi woMnyango Wezifo Ezithathelwanayo, iHuashan Hospital, iFudan University, uthe ngeWeibo. Ngomhlaka 7, iShanghai imemezele imiphumela yokulandelelwa kwamacala ayisithupha aqinisekisiwe asendaweni abikwe phakathi kukaNovemba 20 no-23. Izindawo ezinobungozi obuphakathi nendawo zivulwe zonke ngemuva kwamasonto amabili evaliwe. Izwe elisavaliwe kancane kancane liye laba ndikindiki kuzo zonke izinhlobo zezindaba, futhi namathemba okuvikela ubhubhane nawo abonakala ezolile, kepha imicimbi eminingana iveze izimo ezingaba khona zokushintshana komhlaba ngonyaka ozayo. Ungakwenza kanjani ukushintshana kwamazwe omhlaba ngesimo salo bhubhane
Mayelana nokufana phakathi kweShanghai International Expo Expo namasu okuvimbela ubhadane amaJapan Games Games, uZhang Wenhong uthe okokuqala, ngoNovemba 10, iShanghai International Import Expo yavalwa ngempumelelo ngaphansi kokuphathwa kwama-loop. Abantu abangenayo basebenzise ukuphathwa okuvaliwe futhi bashiya izwe ngemuva komhlangano. Zonke izivakashi zizohlolelwa i-nucleic acid futhi ayikho eminye imikhawulo ezobekwa. Abantu abangaphezu kwezigidi eziyi-1.3 babambe iqhaza kwi-CIIE. Ukuthuthuka kwayo okuyimpumelelo kungathathwa njengokuhlolwa kwemisebenzi emikhulu yokusebenzisana yamazwe omhlaba, yize kuyisikali esincane.
UZhang Wenhong wethule ukuthi ngesonto eledlule ube nezingxoxo nezazi ezibalulekile zokuvikela ubhadane ezweni laseJapan. Izingcezu ezimbili zolwazi zifanele ukunakwa. Okunye ukuthi iJapan izobamba iMidlalo Yama-Olympic njengoba ihleliwe, kanti enye ukuthi iJapan isivele iyalele umuthi wokugomela unyaka wonke ngonyaka ozayo. Kodwa-ke, izinhlolovo zemibono zikhombisa ukuthi kuphela u-15% wabantu abanesifiso esinamandla sokugoma, cishe ama-60% bayanqikaza, kanti ama-25% asele asho ngokusobala ukuthi ngeke agonywe. Ukuthi ama-Olimpiki azoqala kanjani ngaphansi kwezimo ezinjalo akunakusiza ngaphandle kokucabanga.
Izindlela zokuvikela ubhadane ezamenyezelwa yiKomidi lama-Olimpiki laseJapan zinokufana okuningi nalezi zeShanghai International Expo Expo. Kungabonakala ukuthi lezi zinyathelo zingaba yisifanekiso esiyinkomba somhlaba sokuqalisa ukushintshana ngokuzayo. Kubasubathi abavela emazweni nasezifundeni ezinesifo esiwumqedazwe esibi kakhulu, kufanele bahlolelwe igciwane lomqhele elisha lapho befika ezikhumulweni zezindiza zaseJapan. Ngaphambi kokuthi imiphumela yokuhlola itholakale, abasubathi bangahlala kuphela endaweni ebekiwe bese basebenzisa ukuphathwa kwe-loop evaliwe.
Ngokuphikisana necebo elilwa nobhadane lama-Olimpiki aseJapan, ama-Olimpiki aseJapan ahlose ukwenza ukuhlolwa kwe-nucleic acid ukungena phesheya kwezilwandle ukuze kubukwe lo mncintiswano. Ngemuva kokungena, ngeke kube khona imikhawulo yokuhamba futhi akukho okuvalelwa kokungena, kepha i-APP yokungena ngemuva kokungena idinga ukufakwa. Lapho kwenzeka icala, ukuvimbela nokulawula okunembile kuyadingeka. Amasu wokulandelela bonke oxhumana nabo abasondelene nokuthatha izinyathelo ezihambelana nokuqothulwa komqedazwe. Lokhu kuyefana namasu wokuvikela nokulawula weShanghai International Expo Expo kanye nalolu bhubhane lwasendaweni.
Ukuvikela okuqondile nokulawula kuzoba inketho evamile yomhlaba wonke
UZhang Wenhong uthe ukuvimbela nokulawula okuqondile kuzoba yinto ejwayelekile emhlabeni jikelele. Muva nje, izindawo eziningana ezinobungozi obuphakathi eShanghai zivuliwe. Isihluthulelo sokuvimbela ubhadane eShanghai ngalesi sikhathi sincike kakhulu ekulandeleni okunembile nasekuhloleni okugcwele emisebenzini kwezinye izindawo ezinobungozi obuphakathi. Lokhu futhi kunikeza inketho yamadolobha amakhulu amakhulu ukunciphisa amathuba okuba nomthelela omkhulu emisebenzini yezomnotho ngokuvikela nokulawula okunembile.
Ngokwandiswa kwemigomo, umhlaba uzovuleka kancane kancane. Kodwa-ke, ngoba ukugoma kunzima ukuthi kutholakale ngokuphelele (kungakhathalekile imiphumela yocwaningo ekhona yezinhloso zokugoma ngazinye noma iqiniso lokuthi ukukhiqizwa komhlaba wonke kunzima ukukufeza ngesinyathelo esisodwa), ubhadane lomhlaba wonke ngeke luphele kungakapheli iminyaka engu-1-2. Kodwa-ke, kumongo wokuvulwa kabusha komhlaba kanye nokwenza kubejwayelekile ukuvimbela ubhadane, ukuvimbela ubhubhane ngokunemba kungahle kube yinto ejwayelekile emhlabeni jikelele ngokuzayo.
Uthe esimweni sokuvulwa kancane kancane komhlaba kanye nokwandiswa kancane kancane kwemigomo, uhlelo lwezokwelapha lwaseChina kumele luphendule kahle. Ngemuva kokuthi kugonywe abantu abasengozini enkulu, ubungozi bezingqwele ezintsha buzoncipha kancane kancane ngokuzayo, futhi bungaphenduka kancane kancane bube yisifo esithathelanayo sonyaka sokuphefumula esiseduze nomkhuhlane, kepha ukulimala kwaso kukhulu kunomkhuhlane. Mayelana nalokhu, izibhedlela ezinkulu kufanele zibe nomnyango ojwayelekile wokuvimbela nokuphendula, okungukuthi, umnyango wezifo ezithathelwanayo. Ukuphendula lokhu, iShanghai Municipal Health System ibambe umhlangano eShanghai First People's Hospital ngempelasonto. Abanye abaqondisi bezibhedlela abavela eYangtze River Delta nasePearl River Delta babambe iqhaza engxoxweni eshubile futhi baxoxa ngokugcwele ngamasu okuvikela nokulawula e-COVID-19 esizayo. . I-China ililungiselele leli gciwane kanye nekusasa elivulekile.